Ubuhle beviki | KONGOLISOLO
Owesifazane omnyama / wase-Afrika, ngobuhle bakhe oMnyama / wase-Afrika: Bheka: ugcina umbono omuhle; Yazi: uyazi amanani akhe weqiniso; Amandla: kungashintsha umhlaba lapho ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 4, 2020 00: 00 Awekho amazwana
Ngangiqonda kahle ukuthi kunjani ukuba ngowesifazane omnyama / wase-Afrika. Anginayo inkomba yokuphansi ngoba ngiyazi ukuthi ngivelaphi. Ngiyazazi ukuthi ngingubani.	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 27, 2020 00: 00 Awekho amazwana
Ngaphandle kobuhle bakhe nosaziwayo bakhe, uSéréna Williams naye uzinikele emaphutsheni, ngisho nasezinkingeni. USerena Williams, onamahloni, akathandabuzi ukuhamba emgaqweni ha ...	Funda kabanzi